उसको बोली मात्र सुन्न पाएपनि कस्तो हुन्थ्यो ! - Hamrokhotang
Home » News » उसको बोली मात्र सुन्न पाएपनि कस्तो हुन्थ्यो !
उसको बोली मात्र सुन्न पाएपनि कस्तो हुन्थ्यो !
By: HamroKhotang.com on Thursday, December 15, 2016 /
खोटाङ, मङ्सिर २९ । घरको पेटीमा गुन्गुनाउँदै गरेकी एक वृद्धाको आवाज सुनिन्थ्योे, “त्यसको बोली मात्र सुन्न पाएपनि कस्तो हुन्थ्यो ।” उनी आँखाभरी आँसु पारेर भन्दै थिइन््, “पैसा कमाएर आमाबुबाको दुःख हेर्ला भनेको त उ आफै सम्पर्कमा छैन । जसरी भएपनि घर फर्केर आइदिए हुन्थ्यो !”
खोटाङको उत्तर पूवी गाविस निर्मलीडाँडा–१ पेलुङका कुमार कटवाल वि.सं. २०६३ सालमा पैसा कमाउने सिलसिलामा उमेर बढाएर मलेसिया गएका थिए । उनी अहिले घरपरिवारको सम्पर्कमा छैनन् ।
मलेसिया गएको दश वर्षसम्म छोरा घरमा नआएपछि उनका आमाबुबा अहिले उनैको कुरा गरेर दिन बिताउने गरेका छन् । “पैसाको लोभमा सोह्र वर्षको छोरालाई उमेर बढाएर विदेश पठाइयो ।” उनका बुबा टंक कटवाल भन्छन्, “विदेशबाट छोराले पठाउने पैसाको त कुरै छाडौं, अहिलेसम्म उनै सम्पर्कमा नआउँदा निराश भएका छौं ।”
छोरालाई विदेश पठाउन रु ९० हजार ऋण काढेर काठमाडौंसम्म पु¥याएको बुबा टंकले विगत सम्झँदै सुनाउनुभयो । “छोरालाई एयरपोर्टसम्म पु¥याउन म आफै गएको थिएँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामीमा आशा थियो, छोराले पैसा कमाएर केही गर्ला भन्ने तर, अहिले उ गएको ऋणसम्म तिर्न सकिएको छैन ।”
छोरालाई विदेश पठाउँदाको ऋणको ब्याज मात्र अहिले साँवा रकमको दोब्बर भइसकेको कटवाल दम्पत्तीले बताएका छन् । “छोरा नेपालबाट गएको तीन वर्षसम्म सम्र्पकमा थियो ।” उनकी आमा हर्कमाया कटवालले गहभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो, “सम्पर्क हुँदासम्म उसले कमाइ हुदैन भन्ने गथ्र्यो । अहिले सम्पर्कै हुन छाड्यो । जे भएपनि एक दिन फर्केर आउँछ होला !”
कटवाल दम्पत्ती अहिले पैसा भन्दा पनि छोराको खोजीमा रहेका छन् । उनीहरु भन्छन्, “अहिले हामीलाई पैसा चाहिएको छैन । छोरा घर फर्केर आइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा हामी छौं ।” उनीहरु एकै स्वरमा थप्छन्, “चाडपर्व आउँदा सबैका छोराछोरी घरमा आएका हुन्छन् तर, हाम्रो छोरा सम्पर्कमा नहुँदा “चाडपर्वभरी नै रोएर बिताउनुपर्ने हुन्छ ।”
कटवाल दम्पत्तीले मलेसियामा बेपत्ता आफ्नो छोरा खोजी गरीदिन उनीहरुको गाउँमा पुगेका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीका टोली समक्ष आग्रह समेत गरेका छन् । “हामीलाई छोरा नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सिकाइ दिनुहोस् ।” गन्धर्व गीति यात्रा लिएर निर्मलीडाँडा पुगेका सामीको टोलीसमक्ष उनीहरुले भने, “सक्नुहुन्छ भने, तपाईहरुले नै हाम्रो छोरालाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल फर्काइ दिनुप¥यो ।”
उनीहरुसँग छोरा विदेश पठाएको कागजातसमेत नरहेको बालसेवा समाज नेपाल नेर्पामार्फत सञ्चालित सामी परियोजनाको विद्यायालय तथा आमसञ्चार कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक लीला निरौलाले बताउनुभयो । उनीहरुलाई आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
सामी परियोजनाले विदेशमा पुगेर ठगीमा परेका, भनेजति काम र दाम नपाएका, यातना भोगेका, उतै ज्यान गुमाएका लगायतलाई उद्धार गर्दै आएको छ । सोही सन्देश दिन सामीको गन्धर्व गीतियात्रा टोली निर्मलीडाँडा पुगेको थियो ।